22zọ XNUMX iji mepụta ọdịnaya dị egwu | Martech Zone
Ndị folks na Copyblogger abụwo isi iyi nke mmụọ nsọ na ndepụta ndepụta m ọtụtụ afọ. Taa ndi otu a weputara ihe omuma mbu ha banyere uzo 22 iji meputa ihe di nma!
Ihe omuma ihe omuma a gosiputara otu esi eweghachite ọdịnaya di ugbua na usoro mgbasa ozi di iche, nwetakwuo mkpu site na ebe nchekwa gi, ma rute ndi mmadu ohuru na ndi ozo. Ihe ngosi a dabere na Wzọ 21 iji mepụta ọdịnaya na-adọrọ adọrọ mgbe ịnweghị azịza site n'aka onye edemede ọbịa bụ Danny Iny. Anyị echegharịala ụzọ anyị ga-esi gosipụta atụmatụ ndị a na -emepụta ihe, ebe anyị na-agbakwunye ihe atọ dị egwu # 22 (ị ga-ahụ ihe kpatara ya).
Dị ka infographic a? Nweta ihe ahịa ahịa Atụmatụ si Copyblogger. Infographic nke BlueGrass.
Tags: ihe di n’imecontent Marketingoyirimepụta ọdịnayainfographic